12 Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 12 Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub
Laga soo bilaabo qof walba filimka uu ugu jecel yahay Yurub “buuraha ayaa ku nool dhawaaqa muusikada”. Runtii waxyaabaha soo socda 12 buuraha ayaa kaa heesi doona, qalbigaaguna qoob ka ciyaar. Laga soo bilaabo Alps iyo Pyrenees-ka caanka ah ilaa GEMS qarsoon ee Czech Republic, Nagala soo qaybgal faafaahinta a 12 buuraha ugu quruxda badan Yurub.
1. Buurta Matterhorn ee Switzerland
Laga soo bilaabo Gornergat ilaa buuraha Rothorn, Matterhorn waa laga qaddarin karaa meel kasta oo ka mid ah Zermatt. Matterhorn daboolka barafka iyo qaabkiisa saddex-geesoodka ah, abuuro muuqaalo buur qurux badan oo qurux badan.
Guga ama jiilaalka, Matterhorn-ka caanka ah waa meel fasax la yaab leh uu ku tago buuraha. Waxaad ka heli kartaa Matterhorn Alps-ka Switzerland oo aad kala dooran kartaa fuulid 4,478 mitir, si loogu socdo socodka wadada ugu caansan ee ka timaada Zermatt ilaa Hornli Hut.
Socdaalka Matterhorn waa midka ugu quruxda badan Yurub, qoto dheer ee cagaarka Switzerland. Sidaas, waxaad heli doontaa baro badan oo si qurux badan u qabsado oo neefta kaa qabato adigoo u bogaya quruxda dabeecadda.
Basel Ayaa Lagu Kala Qaaday Tareen
Geneva ilaa Zermatt oo Tareen la raacayo
Bern to Zermatt Tareenka
Lucerne ilaa Zermatt Tareen A
2. Jungfrau In Lauterbrunnen Dooxada, Switzerland
Dooxada Lauterbrunnen ee quruxda badan iyo dhulka 72 biyo-dhacyo, waxaad ka heli doontaa baaxadda buuraha Jungfrau. at 4,158 mitir, Jungfrau waa buurta ugu dheer buuraha Bernese Alps.
Mar labaad, waxaad dooran kartaa inaad fuusho ama aad ku raaxaysato aragtida buurta Jungfrau ee cajiibka ah tareenka buurta ugu dheer Yurub. Hal dhinac Mittelland ilaa Vosges, iyo glacier Aletsch ee dhinacaaga kale, gabi ahaanba neefta.
3. Grossglockner In Bariga Tirol, Austria
Buurta ugu dheer ee Grossglockner ayaa ku wareegsan 266 dusha sare ee waxa loo yaqaan saqafka Austria. Ballaaran buurtaani waxay abuureysaa mid ka mid ah aragtida buuraha ee Yurub. Grossglockner wuxuu u taagan yahay dherer 3,798 mitir, iyo Grossvenediger at 3,666 mitir, abuurista mid ka mid ah muuqaalka buuraha ugu quruxda badan Austria.
Waxaad ka heli doontaa kuwan 2 kooxda weyn ee Hohe Tauren park qaranka. Halkan waxaad ku tegi kartaa baaskiil wadista buuraha, socodka ama fuulitaanka dhagaxa. Sidan ayaad u bogi kartaa aragtida muuqaalka leh xagal kasta.
Vienna ilaa Landeck Ischgl Tareen Tareen ah
Munich ilaa Landeck Ischgl Tareen Tareen ah
Salzburg ilaa Landeck Ischgl Tareen tareen ah
Zurich ilaa Landeck Ischgl Tareen tareen ah
4. Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub: Sare Dachstein In Austria
Buurta labaad ee ugu dheer Austria waa Hoher Dachstein, oo ku taal magaalada soo jiidashada leh ee Halstatt. Hoher Dachstein waxay bixisaa buurta ugu quruxda badan iyo aragtida harada xilliga jiilaalka iyo xagaaga. Xagaaga, waad u bogi doontaa buurta karst ee cagaaran iyo kuwa ubaxa leh. Xilliga jiilaalka, ka leexo barafka buurta dusheeda.
Si kastaba ha ahaatee, aragtida buurta ugu quruxda badan ee Hallstatt waa inay ahaadaan goobta 5 Farta farta ee Lake Hallstatt. Haddii aad booqanayso laga bilaabo Abriil ilaa Sebtember, xidho lakabyo qabow oo diirran, maadaama ay wali baraf noqon karto oo baraf noqon karto xilligan oo kale sanadka. Waad ku gaari kartaa aragtidan cajiibka ah baaburka fiilada haddii aadan doorbideynin inaad socod kusii mariso jidka oo dhan si aad u hesho waayo-aragnimo abaalmarin iyo xiiso badan.
Munich ilaa Hallstatt Tareen
Innsbruck ilaa Hallstatt Tareen
Passau ilaa Hallstatt Tareen
Rosenheim oo ku socota Hallstatt oo tareen la socota
Chamonix waa buurta ugu dheer buuraha Alps. Just 15 daqiiqado xadka, Chamonix waa dhul jiilaal yaab leh. halkan, waxaa lagugu qarxin doonaa aragtida muuqaalka leh ee Mont Blanc.
Waad sameyn kartaa tareenka Mont Blanc, ama aad u bogaan aragtiyada qurxoon ee ka soo baxa makhaayadaha iyo makhaayadaha ku yaal magaalada Chamonix. Intaa waxaa dheer, waxaad u kori laheyd Aiguille du Midi ama Mer du Glace. Hawl kasta oo aad doorato, aragtida buuraha ee quruxda badan ee mid ka mid ah buuraha ugu quruxda badan Faransiiska ayaa meel walba kula socon doona.
6. Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub: Pyrenees
Pyrenees-yada quruxda badan waxay bixiyaan aragtida buuraha ugu quruxda badan. Toddobada buurood waxay ku kala teedsan yihiin Faransiiska, Codadka, Jura, Bartamaha Massif, Armifican Massif, iyo Corsican Massif.
Baaxadda buurtan waa mid aad u ballaadhan oo aad u baahan tahay inaad ka kororsato Badweynta Atlantik ilaa badda Mediterranean. Kaliya ma awoodi doontid inaad booqato magaalooyinka qadiimiga ah ee xiisaha leh, laakiin sidoo kale waxaad heli doontaa fursad qaali ah oo aad ku bogaadiso la yaab kale oo dabiici ah. Cajiibkan ayaa dabcan ah biya-dhaca Grande Cascade de Gavarnie ama Gavarnie. Iyada oo dhibic ah 422 mitir, waa biyo-dhaca labaad ee ugu sarreeya Yurub.
Sidaa darteed, sawiradaadu waxay gabi ahaanba noqon doonaan National Geographic kaamil ah.
7. Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub: Val Thorens Faransiiska
Sare 2300 mitir ee buuraha Alps ee Faransiiska, buuraha barafka ah ee Val Thorens waa buuraha ugu quruxda badan wakhtiga qaboobaha. Iskuduwaha dhaadhaca, haysashada koob kookaha kulul ah dabka, ama ku raaxeysiga aragtida gaariga fiilada, indha indhayntu waa wax aad u naxdin badan.
Si kastaba ha ahaatee, halka badankood ay u safraan Val Thorens oo ay ku socdaan barafka, waa wax yaab leh xilli kasta oo kale. Dooxada Tarentaise waxaa ka buuxa guryo jiif ah oo qurux badan, seeraha, iyo webiga Isere, oo leh buuraha Val Thorens ee gadaasha ah, Abuur muuqaal qurxoon si aad ula dhacdid sanadka oo dhan.
8. Dolomites-ka Talyaaniga
Goormaad kala dooran kartaa 7 dhibcaha daawashada, goobta runti waa mid cajiib ah muuqaalka. Buuraha Dolomites waxay ku kala yaalaan Koonfurta Talyaaniga, waa mid ka mid ah keydadka ugu quruxda badan Yurub. Waxaa intaa dheer, waa mid ka mid ah meelaha caanka ah ee tamashleynta adduunka.
Waad dooran kartaa inaad ku qanciso Dolomites safar maalinle ah oo kaaga yimaada Bolzano, ama wareeg 20-kiilo mitir ah. Hawlaha, dalxiis iyo sawir, iyo wadooyinka hortayada, waa kuwo aan dhammaad lahayn. Si aad u sarreysaa dhammaantood, aragtiyadu gabi ahaanba waa kuwo naxdin leh, meel kasta oo safarkaaga ah.
Dhammaan sababaha kor ku xusan, Dolomites-ku waa meesha ugu habboon ee lagu tamashle tago buuraha Talyaaniga.
9. Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub: Mount Snowdon ee Wales
Mount Snowdon waa mid aad u qurux badan oo aan layaab lahayn inuu leeyahay barnaamijkiisa socodka. Snowdon wuxuu ku yaal Wales, iyo kadib 6-8 saacadaha socodka, waad u bogi kartaa aragtida cajiibka ah ee Snowdonia, Anglesey, Pembrokeshire, iyo Ireland.
Intaa waxaa dheer, laga bilaabo dhererka 1085 mitir, sidoo kale waad awoodi doontaa arag harooyinka quruxda badan. Tusaale ahaan, harada Cwellyn iyo Mynydd Mawr waxay bixiyaan aragtiyo cajiiba dhamaadka wabiga Cwellyn.
10. Adrspach-Teplice Gudaha Czech Republic
Czech Republic waxaa badanaa lagu yaqaanaa magaalada Prague ee quruxda badan. Dad aad u yar ayaa wax ka ogaanaya Bohemia cajiibka ah iyo tuulada dhagaxa weyn, Adrspach-Teplice. Adrspach wuxuu ku yaal meel u dhow xadka Poland wuxuuna gabi ahaanba u qalmaa meel Yurub yaababkeeda dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Adrspach-Teplice waa tuulo laga dhisay bartamaha qaab dhismeedka dhagaxa, taagid dheer, leh shaybaarka, durdur liin dhanaan ah, iyo dariiqyada. Meeshan xiisaha badan waxaa laga helay oo keliya gudaha 1824. Tan iyo markaas waxay ahayd meel gaar ah oo loogu talagalay safrayaasha doonaya waxyaabaha aan caadiga ahayn.
halkan, waad mari kartaa wadada loop, iridda Gothic iyo marinnada sirta ah. Ma jiraan wax la mid ah ka-yaabinta qaab-dhismeedka dhagaxa cajiibka ah ee gudaha ka socda oo gaara balliga buluugga ah. Tan iyo markii aad ku dhex socon doontid wadnaha dhagaxaan waaweyn, waxaa fiican inaad booqato xagaaga, markay maalmo dheer yihiin oo iftiin badani jiro.
11. Gobolka Mullerthal Oo Ku Yaalla Luxembourg
Iyadoo qaar ka mid ah aragtida ugu quruxda badan Yurub, buuraha Mullerthal ee ku yaal Luxembourg waxay bixiyaan dariiqyo muuqaal dabiici ah iyo dhibco qarsoodi ah oo qarsoon. Markaad ku dhex socoto kaymaha, dhaaftay harooyinka iyo ilaha biyaha, buuro dhagax leh oo cagaar ah, waxaad ogaan doontaa inaad dhex gashay sheeko xariirooyinka carruurta.
Gobolka Mullerthal wuxuu leeyahay qaar ka mid ah meelaha ugu caansan iyo aragtiyada Yurub. Qalcado, godadka, buundooyinka, iyo biyo-mareennada, waxaa jira aragtiyo qurux badan meelkasta oo aad eegto. Sayidka, socod dheer ama baaskiil wadid, hubi inaad sameyso ugu yaraan dhowr maalmood, si aan u bogaadiyo muuqaalka buuraha quruxda badan ee Mullerthal.
Luxembourg ilaa Colmar Tareen tareen ah
Luxembourg ilaa Brussels Iyadoo Tareen A
Antwerp ilaa Luxembourg Tareen Tareen ah
Metz ilaa Luxembourg Tareen Tareen ah
12. Buuraha Ugu Quruxda Badan Yurub: Stanserhorn, Switzerland
Meelaha barafka, buuro cagaaran oo dhalaalaya, iyo guryo yaryar oo qurxoon oo ku yaal dooxada, aragtiyada ka imanaya Stanserhorn ayaa ah kuwa ugu jacaylka badan. Buurta weyn ee Stanserhorn waa uun 20 daqiiqado ka fog Lucern tareen wuxuuna ka dhigayaa safar maalin wanaagsan qurux badan Switzerland.
Halkan waxaad ku qaadan kartaa baabuurka fiilada ilaa buuraha dushiisa aragtida cajiibka ah ee muuqaalka Swiss Alps iyo harooyinka. Hab kale oo weyn oo loo bogi karo aragtiyada buuralayda ee Stanserhorn ee quruxda badan waa adoo soo qaadaya a barxad. Sidan ayaad maalinta ku qaadan doontaa nasasho iyo neefsashada quruxda iyo buuraha Alps’ hawo nadiif ah.
Zurich ilaa Lucerne Tareen
Bern ilaa Lucerne Tareen
Jeneva ilaa Lucerne Tareen
Konstanz ilaa Lucerne Tareen Tareen ah
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta fasaxaaga 12 buuraha ugu qurux badan Europe tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada "12 Buuraha Ugu Qurxoon Yurub Gudaheeda" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-picturesque-mountains-europe%2Fየሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Bestnaturereservesineurope MountainRange Mountains MountainViews Muuqaal qurux badan Buuraha Picturesque Muuqaal muuqaal ah
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe